खाद्यान्न संकट हुने खतरा छ : धान बिज्ञ बस्नेत /संवाद – NewsAgro
खाद्यान्न संकट हुने खतरा छ : धान बिज्ञ बस्नेत /संवाद
August 23, 2015 NewsAgro0Comments Agriculture, food security, Interview संवाद, Nepal, Newsagro.com, धानबाली एवं बालीविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत volaman singh basnet
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको ३४ प्रतिशत योगदान छ भने त्यसमा धानको २१ प्रतिशत योगदान छ । मुख्य खाद्यान्नका रूपमा धानबालीलाई लिने गरिन्छ । मुलुकमा वार्षिक १ खर्बबराबरको धान उत्पादन हुने गर्छ । यो वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा तराईका धेरै खेतीयोग्य जिल्लाका १८ प्रतिशत खेत अझै बाँझै रहेका छन् । सो कारणले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ । धान उत्पादनको पकेट मानिएका तराईका आठ जिल्लामा रोपाई नहुँदा १२ अर्ब रुपैयाँको धान उत्पादन कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सिँचाइ सुविधाको अभावले बर्सेनि तराईका उत्पादनयोग्य जमिन बाँझै रहने गर्छ । जसको कारणले खेतीयोग्य जग्गामा यो वर्ष पनि खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउने देखिन्छ । सिँचाइ सुविधाको अभावले बर्सेनि तराईका धेरै जिल्ला बाँझै रहने गर्छ । अझै पनि ४० प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । अकासे पानीको भर पर्नुपर्ने जिल्लामा समयमा वर्षा नहुँदा बाँझै रहने गर्छन् । यो वर्ष पनि तराईका धेरै जिल्लामा बाँझै छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर तिन दशकभन्दा धेरै कृषि अनुसन्धान र धानबालीमा अध्ययन अनुसन्धान गदै आएका धानबाली एवं बालीविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतसँग लक्ष्मी सापकोटाले गरेको संवाद :
० समयमा धान रोपाइँ नहुँदा खाद्यान्न उत्पादनमा कस्तो असर पर्छ ?
– यो वर्ष मात्र होइन विगतका आठ/दस वर्षलाई समीक्षा गर्ने हो भने वर्षा जुन १० देखि सुरु हुने गरेतापनि अहिले घटेर सेप्टेम्बर २३ पछि मात्र वर्षा सक्रिय हुने गरेको छ । जसका कारणले गर्दा पनि धान रोपाइँमा ढिलाइ हुने गरेको छ । समयमा धान रोपाइँ नहुँदा उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म कमी हुने देखिन्छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तको असरले वर्षा नियमित हुन सकेको छैन । मनसुन सक्रिय नहुँदा यो वर्ष पनि तराईका धेरै जिल्लामा पर्याप्त रोपाइँ हुन सकेको छैन । यसले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउने देखिन्छ । विशेष गरी बिउ राखेको २५ देखि ३० दिनको बेर्ना रोप्नुपर्ने हुन्छ । तर, मनसुन सक्रिय नहुँदा बिउ राखेको डेढ महिनासम्म पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन । जसका कारणले गर्दा उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउने देखिन्छ । पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा १२ वर्ष वर्षा ढिलो गरी भएको छ । जलवायु परिर्वतनका कारणले गर्दा मनसुन सक्रिय क्रमिक रूपमा ढिलो हुँदै गएको छ । उच्च पहाडमा जेठभित्र, मध्य पहाडमा असारभित्रमा, तराई र भित्री मधेसमा साउन अन्तिमसम्म रोपाइँ गरिसक्नुपर्छ । भदौ लाग्दा पनि अझै तराईका धेरै जमिनमा धान रोपाइँ भएको छैन । जसका कारणले खाद्यान्न उत्पादनमा उलेख्य कमी आउने देखिन्छ ।
० सिँचाइ सुविधा नपुग्ने ठाउँमा के कस्ता वैकिल्पक व्यवस्था गर्न सकिन्छ ?
– धेरै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । अधिकांश जमिन अकासे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारणले गर्दा पनि कम पानीमा पनि धेरै उत्पादन हुने खडेरी सहन सक्ने धानका जात लगाउन सकिन्छ । सुक्खा धान १ देखि ६ सम्मका जात सिफारिस भइसकेका छन् । खडेरी जुनसुकै बेला हुन सक्ने हुँदा विन्देश्वरी, जानकी, तरहरा एक, हर्दिनाथ २, राधा ४ , ७, ११, १२ जात किसानले लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ । सिँचाइ सुविधा नपुग्ने ठाउँमा सतह सिँचाइ, भूमिगत पानी तान्ने, स्यालो टुवेल, वाटर हार्भेस्टिङ (वर्षाको पानी संकलन) गर्न सकिन्छ । प्रविधितर्फ एउटै किसिमको धानको जात धुले र हिले ब्याडमा बेर्ना राख्न सकिन्छ । खडेरी प¥यो भने धुलोमा राखेको बेर्नाले धेरै उत्पादन हुने गर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा एक केजी धान उत्पादन गर्न ३ हजार देखि पाँच हजार लिटर पानी आवश्यक पर्छ । साढे तिन अर्ब जनताको मुख्य खाद्यान्न धान रहेको छ । एसियामा धानको उत्पादन र खपत ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हुन्छ । सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देशमा चीन र दोस्रोमा भारत रहेको छ । कम पानीमा धेरै धान फलाउन प्रविधि आवश्यक पर्छ । त्यो सँगै धानलाई सीधै छरेर खेती गर्न सकिन्छ । धानखेतीको सघनीकरण (एसआरआई) प्रविधिबाट पनि धान उत्पादन गर्न सकिन्छ । वर्षभरि सिँचाइ सुविधा २५ देखि ३० प्रतिशत जमिनमा मात्र हुन्छ । धानको उत्पादनले जीडीपीलाई तलमाथि पार्ने हुँदा सिँचाइ सुविधा नपुग्ने स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
० आउँदो २५ अर्बको धान उत्पादन कम हुने अनुमान गरिएको छ । यसले कस्तो असर पार्छ ?
– नेपालमा प्रति वर्ष प्रतिव्यक्ति १ सय ९१ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । जसमा ९० केजी चामल, ४५ मकै, ४५ गहुँ र ११ किलो अन्य (कोदो जौ, फापर) हुनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै ०६८/६९ मा ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । त्यस अवधिमा पनि खाद्यान्न आयात भएको थियो । खानेबानीमा परिवर्तन नहुँदा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । भात खाने बानीका कारणले गर्दा पनि मुलुकमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ । संसारमा उत्पादन भएको एक तिहाइ खाद्यान्न नष्ट हुने गर्छ । खेर पाल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दै जानुपर्छ, गर्न ।
यो वर्ष धान उत्पादन पर्याप्त नहुँदा खाद्य संकट हुने देखिन्छ । २५ अर्बको धान उत्पादन कम हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा कम उत्पादन हुँदा भारतमा पनि असर पर्ने गर्छ । देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । कुल खाद्यान्नमा धानले ५० प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । बाँच्नका लागि अरू देशको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई परित्याग गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति बनाउनुपर्छ ।
उत्पादन बढाउने नीति नियमन बनाउने गरिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । जसका कारणले गर्दा पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तिन वर्षमा सञ्चित खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुपर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वन गर्दैै लैजानुपर्छ । सिँचाइमा लगानी बढाउनुप¥यो । कृषि र सिँचाइ मन्त्रालयको समन्य गरेर सिँचाइ सुविधा विस्तार गदै जानुपर्छ । ।
० मुलुकमा धानको उत्पादकत्व कति छ ?
– नेपालमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर तिन दशमलव चार टन रहेको छ । धानको उत्पादकत्व कम रहेकाले पनि बढाउन अति आवश्यक छ । एसियामा प्रतिहेक्टरमा चार टन उत्पादकत्व रहेको छ । सबैभन्दा धेरै जापान र चीनमा प्रतिहेक्टर ६ टन उत्पाकत्व रहेको, मुलुकमा धानको उत्पादकत्व बढाउने उन्नत जात, खेती गर्ने तरिका, कृषि सामग्री (मल, बिउ, कृषि ऋण) मा जोड दिनुपर्छ । खाद्यान्नको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान र प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । परम्परागत खेती प्रणालीको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न अति जरुरी छ । उत्पादन परान्त प्रविधि (पोस्टहार्भेस्टिङ) बाट पनि उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।
० मुलुकमा खाद्यान्नको आवश्यकता कति हो ?
– २ करोड ८० लाख जनसंख्यालाई वर्षमा ५४ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । नेपालमा २५ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने १४ वर्ष खाद्यान्न अपुग भएको थियो । बाँकी ११ वर्ष मात्र खाद्यान्न पर्याप्त रहेको थियो । भात खाने बानीको कारणले गर्दा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । तिन/चार वर्षको अवधिमा नेपालको उत्पादन हेर्दा आवश्यकताभन्दा बढी भई बचत रहेको देखिन्छ । विभिन्न जिल्लामा खाद्य संकट भने कायम छ । यस अवधिमा अर्बांै रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । तथ्यांकले खाद्यान्न बचत रहेको देखाए पनि खानेबानीमा परिवर्तन नहुँदा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । चामलसँगै गहुँ, मकै, जौ र फापरलाई सन्तुलन गरेर उपभोग गर्नुपर्छ ।
० खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ?
– विश्वमा कृषि क्षेत्रमा १९६६ मा हरित क्रान्ति आयो । यसले उन्नत तथा विकासे बिउ, रासायनिक मल र विषादीलाई जोड दियो । हरित क्रान्ति आउनुभन्दा पहिला विश्वको खाद्यान्न उत्पादन ६ सय ३१ मिलियन टन थियो अहिले आएर खाद्यान्न उत्पादन बढेर २५ सय मिलियन टन पुगको छ । नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउन धानको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । विश्वमा धानको उत्पादन बढाउन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट धानलाई सी–३ पद्धतिबाट सी–४ मा लैजान वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन् । यो पद्धति सफल भए धानको उत्पादनमा ३० देखि ५० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । धानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्नुपर्छ । सन् २००८ मा विश्वमा खाद्य संकट भएको थियो । त्यसबेला भारतले मोटो धान, चामल र गहुँ चार वर्षसम्म निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । मुलुकमा धानको उत्पादन बढाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन अर्थात धान मिसन कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई परिचालन गरेर गर्नुपर्छ । अहिले तराईका आठ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा) मा धान संकट हुने देखिएको छ । यी आठ जिल्लामा मात्र नभएर देशैभरी संकट भएको हो । खाद्यान्न संकट हुने देखिएपछि सरकारले समयमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सिँचाइ सुविधा नपुग्ने ठाउँमा सतह सिँचाइ, भूमिगत पानीलाई तानेर पनि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकिन्छ ।
वाटर हार्भेस्टिङ (वर्षाको पानी जम्मा गर्ने), अन्तर्राष्ट्रिय मुुलुकमा धानमा पनि थोपा सिँचाइ सुरु भएको छ । केही समयपछि जुन प्रविधि नेपालम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । गत वर्षदेखि मसिना तथा बास्नादार धान खेती गरिँदै आएको छ । यो वर्षदेखि तराईका विभिन्न १२ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको छ । यसले उत्पादनमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
उत्पादन बढाउन परम्परागत जात र उन्नत प्रविधिलाई विशेष जोड दिइनपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान केन्दं्र (यिरी) का अनुसार संसारमा एक लाख ४० हजार रैथाने जातका धान छन् । एक लाख १७ हजार जिन बैंकमा संरक्षण गरी राखिएको छ । नेपालबाट लगेर हजाराँै संख्यामा बिउ संरक्षण गरी राखिएको छ । नेपालमा १४ दखि १५ लाख हेक्टरमा धान खेती गरिँदै आएकामा १३ प्रतिशत विकासे धानका जात लगाइने गरिन्छ । उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि चैत धान, भदैया, हिउँदे (बोरो) धान समेत लगाउन सकिन्छ । बर्खे धानको तुलनामा चैतै धानको उत्पादन प्रतिहेक्टरमा २० देखि २५ प्रतिशतले वृद्धि हुने गर्छ । तराई र भित्री मधेसमा लगाइने चैतै धानलाई विस्तार गर्न सके उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
० अहिले मुख्य रूपमा कस्ता–कस्ता धानका जात लगाउने गरिन्छ ?
– अहिलेसम्म धानका १ सय चार जात अनुसन्धान भई सिफारिस भइसकेका छन् । जसमा १२ ओटा जात प्रयोगमा छैनन् । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले हापानी अनुकूल हुने धानका जात सिफारिस गरी किसानसमक्ष पठाएको छ । खडेरी र डुबान सहन सक्ने धानका जात सिफारिस गरिएको छ । खडेरी सहन सक्नेमा सुक्खा १ देखि सुक्खा ६ सम्मका धानका जात सिफारिस गरिएको छ । सहन सक्नेमा डुबान सहनेमा स्वर्णा सब १ अनुसन्धान गरिएको छ । त्यस्तै अन्य जातमा विन्देश्वरी, जानकी, तरहरा १, राधा ४, राधा ७ , राधा ११ र १२ रहेका छन् । नार्कले अनुसन्धान गरेका धानका जातको प्रतिहेक्टर उत्पादन चारदेखि पाँच टन हुने गर्छ ।
० आयात प्रतिस्थापन गर्न के गर्नुपर्ला ?
– दुःखको कुरा कृषिप्रधान देश भनिए पनि स्थानीय माग पूरा गर्न अर्बांै रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गर्न गम्भीरतापूर्वक कार्यक्रम रणनीति बनाएर लाग्नुपर्छ । सिञ्चित क्षेत्र बढाउनुपर्छ । उन्नत जातका साथै खेती गर्ने तरिका अपनाएर जानुपर्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्छ । भूपयोग ऐन नियम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव भइरहेका बेला युवालाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
← भूकम्प पीडित किसानका लागि हेफरको परियोजना
अज्ञात रोगले हप्तादिनमा २ सय बाख्रा मरे →